Xiaomi Archives — Anycall Mobile
Xiaomi လို့ပြောလိုက်ရင် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ပြန်ရတာအရမ်းတန်တဲ့ ဖုန်းတွေကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ အခု Mi 11 ကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခုကြိုပြီး ပြောချင်တာကတော့ Review က နည်းနည်းလေးတော့ ရှည်ကောင်းရှည်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Sit Back,…
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ အရင်လို Floating Window သုံးမရတော့ရင်
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ အရင်လို Floating Window သုံးမရတော့ရင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Developer Option မဖွင့်ရသေးတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ Developer Option ဖွင့်ပေးဖို့အတွက် Setting ထဲက About…
MIUI မှာ အရေးကြီးတဲ့ ဖုန်း Contact တွေကို အမြန်ဆုံး ဖုန်းခေါ်ချင်ရင်
ဒီနည်းလေးက MIUI တင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ Google UI တင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီနည်းလေးကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Setting ထဲက Apps ထဲက…
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Dark Mode ကို Schedule ထားပြီး ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
ညပိုင်တွေမှာ ဖုန်းကို Dark Mode ဖွင့်ပြီး အသုံးပြခြင်းက မျက်စိထိခိုက်မှုကို ပိုပြီးသက်သာစေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Dark Mode ကို ဘယ်အချိန်မှာ “ပိတ်မယ်၊ဖွင့်မယ်” ဆိုတာကို အမြဲတမ်း Setting သွားသွားပြီးတော့ ဖွင့်ပိတ်လုပ်နေစရာ မလိုအောင်…
Mi Browser မှာ Auto တက်နေတဲ့ သတင်းတွေ Video တွေကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ?
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Xiaomi (Global ရော China) User တွေအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mi Browser ထဲ ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Auto တက်တက်နေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို ဘယ်လိုပိတ်ထားလို့ရလဲ ဆိုတာကို…
Mi 11 Pro ကို ဖေဖော်ဝါရီလမှာမိတ်ဆက်လာမယ်…
Xiaomi အနေနဲ့ မကြာသေးခင်ကပဲ Online Launch Event တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ Flagship Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi 11 Series မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က Mi 10 Series မှာMi…
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Snapdragon 888 Chipset ဖုန်းအနေနဲ့ထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Mi 11
Xiaomi အနေနဲ့ ဒီနေ့ ညနေ ၆ နာရီအချိန်လောက်တုန်းက Online Launch Event တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ Flagship Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi 11 Series ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Mi…
Xiaomi Mi 11 မှာလည်း Charger ပါလာတော့မှာမဟုတ်
Xiaomi အနေနဲ့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်လာဖို့ ၂ ရက်ပဲလိုတော့ပေမယ့်လည်း ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Leaks သတင်းတွေကတော့ဆက်ထွက်နေပါတယ်။ အခုမှာလည်း Mi 11 ရဲ့ဘူးခွံထဲမှာ Charger ( အားသွင်းခေါင်း) မပါလာမယ့်အကြောင်းထွက်လာပါတယ်။…
Xiaomi Mi 11 ရဲ့ Live Shots ပုံတွေထပ်ထွက်လာ…
Xiaomi ကတော့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ Mi 11 ကို ကမ္ဘာ့နံပါတ်ပထမဆုံး Snapdragon 888 Chipset ဖုန်းအနေနဲ့မိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ Xiaomi ဘက်က Mi 11 နဲ့ပတ်သက်ပြီး…
Mi 11 Series ကိုတွေ့လာရတော့မယ့် ဒီဇင်ဘာ ၂၈
Xiaomi ကတော့ သူတို့ရဲ့ Flagship Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi 11 Series ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ တရုတ်မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို Xiaomi ဘက်ကနေကြေညာပြီး ခဏအကြာမှာပဲ …
Xiaomi ရဲ့ MIUI 12.5 Feature အသစ်တွေအကြောင်းနဲ့ ဘယ် Device တွေမှာ အရင်ဆုံး ရလာမှာလဲ?
Xiaomi ကတော့ MIUI 13 မလာခင်မှာ MIUI 12.5 ကို အရင်ထွက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အသစ်ထွက်လာမယ့် MIUI 12.5 မှာ ပါဝင်လာမယ့် Feature အသစ်တွေအကြောင်းနဲ့ အရင်ဆုံးလာလာမယ့် Xiaomi…
Mi 11 ရဲ့ Real-life ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ
အရင် ဒီဇင်ဘာလ‌ ၃ ရက်နေ့လောက်တုန်းက Xiaomi ရဲ့ Flagship Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi 11 Series ရဲ့ ပုံတွေထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာလည်း Mi 11 Series ထဲက Mi…